Isi iyi agbanwere: gịnị ka ọ bụ, ọdịiche na ahịrị, yana gịnị ka ọ bụ | Ngwaike efu
Isaac | 01/10/2021 09:00 | Emelitere ka 07/09/2021 09:52 | Ihe eletrọniki
una gbanwere isi iyi bụ ngwaọrụ elektrọnik nke nwere ike ịgbanwe ike eletrik site n'usoro ihe eletriki, dị ka transistors, voltage regulators, wdg. Nke ahụ bụ, ọ bụ a ọkọnọ ike, mana na ndịiche n'ihe gbasara ndị ahịrị. A makwaara isi mmalite ndị a dịka SMPS (Mgbanwe Ọnọdụ Ike Agbanwe), ma a na -eji ya ugbu a maka ọtụtụ ngwa ...
1 Gịnị bụ ike ọkọnọ
2 Isi mmalite linear na isi mmalite agbanwere: ọdịiche
4 Ofdị isi mmalite
Gịnị bụ ike ọkọnọ
una ọkọnọ ike, ma ọ bụ PSU (Ngalaba Nweta Ike), bụ ngwaọrụ eji ebunye ọkụ eletrik n'ụzọ kwesịrị ekwesị na ngwa ma ọ bụ sistemụ dị iche iche. Ebumnuche ya bụ ịnata ume site na netwọk eletriki wee gbanwee ya ka ọ bụrụ voltaji na ikuku kwesịrị ekwesị ka ngwa ndị ejikọtara wee rụọ ọrụ nke ọma.
Ike ọkọnọ agaghị agbanwe voltaji nke nrụpụta ya na ntinye ya, mana ọ nwekwara ike gbanwee ike ya, dozie ma kwụsie ike iji gbanwee site na ịgbanye ọkụ gaa na nke ugbu a. Nke ahụ bụ ihe na -eme na isi mmalite PC, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ na ihe nkwụnye ọkụ iji chajịa batrị. N'okwu ndị a, nke CA ọ ga -esi na mbụ 50 Hz na 220 / 240v, gaa DC na 3.3v, 5v, 6v, 12v, na ihe ndị ọzọ ...
Isi mmalite linear na isi mmalite agbanwere: ọdịiche
Ọ bụrụ na ị chetara ihe nkwụnye ọkụ ma ọ bụ chaja nke ekwentị ochie, ha buru ibu ma buru ibu. Ndị ahụ bụ ọkụ na -akwụ n'ahịrị, ebe ihe ọkụ ọkụ taa na kọmpat taa na -agbanwe ọkụ. Ihe dị iche:
Na a font ahịrị a na -ebelata mgbagha nke ọkụ eletrik site na onye na -agbanwe ọkụ, ka chi wee mezie ya. Ọ ga -enwekwa ọkwa ọzọ nwere electrolytic capacitors ma ọ bụ ihe nkwụnye ọkụ eletrik ndị ọzọ. Nsogbu dị n'ụdị transformer a bụ mfu nke ume n'ụdị ọkụ n'ihi na transformer. Tụkwasị na nke a, transformer a abụghị naanị na ọ nwere nnukwu igwe dị arọ na nnukwu, mana maka nnukwu ebili mmiri ha ga -achọ eriri ikuku ọla kọpa nke ukwuu, si otú a na -abawanye ibu na nha.
na gbanwere isi mmalite Ha na -eji ụkpụrụ yiri ya maka usoro a, mana ọ nwere ihe dị iche. Dịka ọmụmaatụ, n'ọnọdụ ndị a, ha na -abawanye ugboro nke ugbu a, na -aga site na 50 Hz (na Europe), ruo 100 Khz. Nke a pụtara na mfu na -ebelata ma nha nke transformer na -ebelata nke ukwuu, yabụ na ha ga -adị mfe ma nwekwuo kọmpat. Iji mee ka nke a kwe omume, ha na -atụgharị AC ka ọ bụrụ DC, wee gbanwee DC gaa AC nwere ugboro dị iche karịa nke mbụ, wee gbanwee AC wee laghachi DC.
Taa, a na -enyekarị ọkụ eletrik n'usoro ha apụwo n'anya, n'ihi ịdị arọ ya na oke ya. Ugbu a, a na -eji switched eme ihe n'ụdị ngwa niile.
Ya mere, Isi ihe dabere na isi ọrụ, ha bụ:
El nha na ibu nke ahịrị nwere ike ịdị mkpa, yana ihe ruru kilogram 10 n'ọnọdụ ụfọdụ. Mgbe ndị agbanwere, ịdị arọ nwere ike ịbụ naanị gram ole na ole.
N'ihe banyere Mmepụta voltaji. N'ihe banyere ndị agbanwere, ha nwere ike ịha nhata, dị ala, ma ọ bụ tụgharịa karịa nke ntinye, na -eme ka ọ nwekwuo ike.
La arụmọrụ na mgbasa Ọ dịkwa iche, ebe ọ bụ na ndị gbanwere agbanwe na -arụ ọrụ nke ọma, na -eji ike eme ihe nke ọma, ha anaghị agbasasịkwa oke ọkụ, yabụ na ha agaghị achọ nnukwu usoro jụrụ oyi.
La mgbagwoju anya ọ dịtụ elu na agbanwere n'ihi ọnụọgụ nke ukwuu.
Mkpụrụedemede linear anaghị emepụta nnyonye anya n'ozuzu, yabụ ha kacha mma mgbe ndabichi ekwesịghị ime. Onye gbanwere agbanwe na -arụ ọrụ na ugboro ugboro dị elu, ọ bụ ya mere na ọ dịghị mma na nke a.
El ihe ike maka isi mmalite dị larịị, n'ihi na a na -enweta ike site na ọnụ ọnụ ọkụ eletrik na ahịrị ike. Ọ bụghị otu a na ndị agbanwere agbanyeghị, agbanyeghị na agbakwunyere usoro nke gara aga iji dozie nsogbu a nke ukwuu, ọkachasị na ngwaọrụ ndị erere na Europe.
Ebe e si nweta ya: Avnet
Iji ghọta nke ọma arụ ọrụ nke isi mgba ọkụ, a ghaghị ịhazi ọkwa ya dị iche iche dịka ihe mgbochi, dị ka enwere ike ịhụ na foto nke mbụ. Ihe mgbochi ndị a nwere ọrụ ha akọwapụtara:
Myọ 1: ọ bụ ya kpatara iwepu nsogbu nke netwọk eletriki, dị ka mkpọtụ, nkwekọrita, ntughari, wdg. Ihe a niile nwere ike igbochi ọrụ nke ihe ndị nwere ike.
Onye nrụzigharị: ọrụ ya bụ igbochi akụkụ nke mgbaàmà sinusoidal ịgafe, ya bụ, ugbu a na -agafe naanị n'otu ụzọ, na -emepụta ebili mmiri n'ụdị ụda.
Onye nrụpụta ihe ike.
Condenser- Ndị na -eme ihe ike ga -ebelata ihe ọkụkụ pulse na -apụta na ọkwa gara aga, na -echekwa ụgwọ ahụ ma mee ka ọ pụta nke ọma, ọ dị ka mgbama na -aga n'ihu.
Ihe ntụgharị / njikwa. Onye njikwa ga -achịkwa ihe niile, nke nwekwara ike rụọ ọrụ dị ka ihe nchebe.
Ihe ntụgharị: na -ebelata voltaji na ntinye ya iji megharịa ya na obere voltaji (ma ọ bụ ọtụtụ obere voltaji) na mmepụta ya.
Optocoupler: ọ ga -ejikọ nrụpụta isi mmalite ya na sekit njikwa maka ụkpụrụ ziri ezi, ụdị nzaghachi.
Ofdị isi mmalite
Enwere ike ekewa isi mmalite agbanwere n'ime ụzọ anọ ụdị isi:
Ntinye AC / mmepụta DC: Ọ nwere ihe nrụzi, commutator, transformer, rectifier mmepụta na nzacha. Dịka ọmụmaatụ, ọkụ eletrik nke PC.
Ntinye AC / mmepụta AC. Ọmụmaatụ nke itinye n'ọrụ ga -abụ ọkwọ ụgbọ ala eletrik.
Ntinye DC / mmepụta AC: A maara ya dị ka onye na -etinye ego, ha anaghị adịkarị ka ndị gara aga. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịchọta ha na generators 220v na 50Hz site na batrị.
Ntinye DC / mmepụta DC: ọ bụ voltaji ma ọ bụ ihe ntụgharị ugbu a. Dịka ọmụmaatụ, dị ka ụfọdụ chaja batrị maka ekwentị mkpanaaka ejiri n'ụgbọ ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ihe eletrọniki » Isi iyi agbanwere: gịnị ka ọ bụ, ọdịiche na ahịrị, yana ihe ọ bụ